चाल-ढाल सुधारेर आत्मविश्वास बढाउने
मिठाइ, मलाई तिम्रो लत लागेको छ !
बिग्रिएको सम्बन्ध पछि आफैलाई ठिक पार्न
तपाइको खुशी कता छ ? – भावना राम्रो हुनुको महत्�
बिहे र काम सन्तुलन गर्ने तरिका
धेरै सोच र चिन्तासँग सम्झौतागर्ने
मेनोफोबिया- महिनावारीसँग डर
सकारात्मक हुनुहोस् l तरिका यहाँ छन्
थकानका सामान्य ६ कारणहरू
स्वास्थ्यमा सङ्गीतको अद्भुत प्रभावहरु
Q मानसिक गडबडी हुने रोग वा सिजोफ्रेनिया र बहु- व्यक्तित्व विकारको बीचमा के अन्तर छ ?
धेरै मानिसहरू मानसिक गडबडी हुने रोग वा सिजोफ्रेनिया र बहु- व्यक्तित्व विकार एउटै वा उस्तै हुन भनेर विश्वास गर्छन् । यद्यपि तिनीहरू फरक फरक छन् । सिजोफ्रेनियामा मानिसले केही कुराको भ्रम र धोखा ठान्दछन् जुन वास्तविकतामा रहेको हुदैँन । बहु-व्यक्तित्व विकारमा भने मानिसको दुई अलग व्यक्तित्वहरु हुन्छन् जसले व्यक्तिहरुको व्यवहारलाई नियन्त्रित गर्दछ । यो स्मरण हानिसँग सम्बन्धित छ । तिनीहरूको भ्रम हुदैँन । सिजोफ्रेम भएका धेरैजसो व्यक्तिहरुको प्रायः सामान्य समाजमा अझ बढी गार्होसँग समय बितिरहको छन् । धेरै व्यक्तित्व विकार भएका व्यक्तिहरूले प्राय: सफल, सामान्य जीवनको साथमा स्वस्थ, अरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर बसिरहेको हुनसक्छ ।
Q आत्महत्या गर्नको लागि धेरै साहस चाहिएतापनि किन आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई कातर भनिन्छ ?
आत्महत्या गर्ने कुरालाई गलत र अनुचित मानिन्छ। आत्महत्याले तपाईंको सबै भविष्य, तपाईंले गर्न सक्ने सबै कुराहरू मेटाउदँछ, किनभने तपाई बिगत वा वर्तमानसँग केही राख्न सक्नुहुन्न । मानिसहरूले अगाडि बढ्ने साहस नगर्दा नै सामानयतयां आत्महत्या गर्ने गर्दछन् । यो आइन्दा केही कुराहरु अझ राम्रो हुनेछैन भनेर आशा मार्नु हो । भावनात्मक निराशाको प्रभावको अधीनमा रहेर आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले आफुलाई हेरचाह गर्नेहरू सबैले उपेक्षा गरेको भन्दै आफुलाई मार्छन्, जसले उनलाई मद्दत गर्दथें । यद्यपि त्यो समयमा, आत्महत्या गर्ने मानिसहरूलाई कातर भन्न रामरो हुदैँन । वास्तवमा, तिनीहरूलाई वरिपरमा ति मानिसहरुबाट अधिकतम मद्दत र समर्थन चाहिन्छ । एउटाले तिनीहरूलाई आफूलाई अझै राम्रो नठान्दासम्म र आफ्नो जीवनका परिस्थितिहरू महसुस गर्न नथाल्दासम्म सहयोग गरिरहनु पर्दछ । सुरुङको अन्त्यमा पनि प्रकाश हुन्छ । आत्महत्या गर्ने मानिसहरूले यो कुरा सम्झिन महत्त्वपूर्ण छ, "यो पनि, अगाडि बढ्नेछ ।"
Q म २४ वर्षीया महिला हुँ जो सधैं थकित र "यसबाट बाहिर जान चाहने" खालको छु । म जति धेरै सुतें पनि, जति शक्तिवर्द्धक पेय पदार्थ/ भिटामिन खाएपनि, म सधैं थकित हुन्छु, कुनै उत्प्रेरणा छैन, विचलित, दिमागले काम नगर्ने र आफुजस्तै नै छैन । म खानाको एलर्जीको कारणले आफूले खाने खानाहरूमा सीमित छु र मैले २ बर्ष पहिले यी प्रभावहरू महसुस गरिरहेको छु । मैले एलर्जी जाँच पनि गरेको थिए । तपाईं मलाई मद्दत गर्न केहि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ? म फेरि सामान्य मानव जस्तै महसुस गर्न चाहन्छु ।
तपाईंको अवस्थाको कारण क्याफिन वा रक्सी धेरै खाएर, अत्याधिक शारीरिक क्रियाकलापहरू आदिको कारणले हुनसक्छ । अनियमित खानाको बानी, केही कलेजो, फोक्सो, रक्तअल्पत्ता, मधुमेहसँग सम्बन्धित मेडिकल सर्तहरूसँग यी कुराहरुसँग सम्बन्धित छन् । चिन्ता, तनावको रूपमा हुने मनोवैज्ञानिक अवस्थाहरूले तपाईंको लक्षण धेरै चोटि हुन सक्छ । जब तपाईंलाई खानाको एलर्जी भएको हुन्छ भने पहिला आफ्नो आहारसँग समान व्यवहार गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । शायद तपाईं एलर्जीको कारणले पनि पर्याप्त र उचित आहार लिन असमर्थ भएको हुन सक्नुहुन्छ । आहाराविज्ञसँग परामर्श लिनु राम्रो हुन सक्छ । नियमित व्यायामले तपाईंलाई अझ राम्रो मद्दत पुर्याउन सक्छ । यदि तपाईंलाई सुत्न सजिलो भईरहेको छैन भने आराम गर्नको लागी राम्रो तरिकाहरू सिक्नुहोस् । योगा वा ध्यानको प्रयास गर्नुहोस् । उचित कार्य र व्यक्तिगत तालिका कायम राख्नुहोस् ।
Q अज्ञात मानसिक गडबडी हुने रोग वा सिजोफ्रेनिया भनेको के हो ?
अज्ञात प्रकारको सिजोफ्रेनियालाई अन्य प्रकारहरुमा देखिएका केहि प्रकारका लक्षणहरू भनेर देखाइएका छन् तर तिनीहरूमध्ये कुनै पनि एक प्रकारलाई सिजोफ्रेनियाको रूपमा परिभाषित गर्न पर्याप्त छैन । यसलाई मिश्रित क्लिनिकल लक्षणको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ ।
Q बालबालिकाप्रति यौन आकर्षण हुने ब्यक्ति वा पेडोफाईलको विशेषताहरु के- के हुन् ?
पेडोफाईल एउटा मनोचिकित्सासम्बन्धि विकार हो । यसलाई १६ वर्ष वा माथिको उमेरको व्यक्तिको रुपमा लिइन्छ र पूर्व- किशोरी बच्चाहरुमा सामान्य वा विशेष रूपमा यौन रुचि राख्दछ जस्तै सामान्यतया ११ वर्ष वा सानो हुन्छ । पेडोफाईलमा निदानको लागि उमेरको अन्तर कम्तिमा ५ वर्ष वा बढिको हुनुपर्छ ।
Q केही मानिसहरू किन दयालु हुदैँनन् ?
दया भनेको अरू मानिसहरुको लागि बुझ्ने वा सहानुभूति हो । दया एउटा भावना हो जुन हामी अरूको पीडा दिएर महसुस गर्छौं जसले अरुलाई सहयोग गर्ने इच्छालाई उत्प्रेरित गर्दछ । विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न चीजहर द्वारा सारिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि एउटा व्यक्तिमा भिखारीको लागि कुनै दया नहुन सक्छ तर सडकका जनावरहरूको लागि धेरै दया हुन सक्छ । जब सम्म एकजना व्यक्ति केहि न केहि चीजहरु प्रति दया महसूस गर्न सक्षम छ, यसलाई सामान्यतया: सामान्य मानिन्छ । यद्यपि तपाईंले केही मान्छेलाई कुनै पनि वा कसैको लागि कुनै दया नभएको फेला पार्न सक्नुहुनेछ । यो २ ओटा कारणले हुन सक्छ: आनुवंशिक वा पालनपोषण । केही मान्छेहरु उनीहरुको खूशीमय बाल्यकाल हुदाँहुदैँ पनि आनुवंशिक रूपमा नै थोरै वा कुनै दया नभएको हुन सक्छ । जबकी केही मानिसहरु बिगतमा भएका कडा अनुभवहरूको कारण आफ्नो भावनात्मक प्रतिक्रिया बन्द गर्छन् । बाल्यकालमा प्रेम र भावनात्मक सहायताको कमीले पनि समानुभूतिको कमी पनि हुनसक्छ ।
Q म धूम्रपान रोक्न कहाँ सहयोग पाउन सक्छु ?
तपाईं धूम्रपान छोड्न चाहनु भएको कुरा प्रशंसायोग्य छ । कुनै पनि खराब बानी छोड्न तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो मद्दत गर्न सक्ने व्यक्ति भनेको तपाईं आफैं नै हो । तपाईंलाई असम्भव लागेको केही कुरा गर्न भित्री आवाज धेरै महत्त्वपूर्ण छ । तपाईंले यो गर्छु भनेर निर्णय गरेमा केही पनि असम्भव हुँदैन, बरु तपाईंलाई अरुले औंला ठड्याएपनि ठड्याओस् । यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भनें, तपाई आफ्नो चिकित्सक, साथी, परिवारको सदस्य वा तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै विश्वास गर्ने व्यक्तिसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ । अचानक नछोड्नुहोस् किनकि यसले केहि प्रतिकूल प्रभावहरू ल्याउन सक्छ; आवृत्ति र धुम्रमानको संख्यामा क्रमशः कमी गर्नुहोस् ।
Q के तनाव र चिन्ताको कारणले बिमिरा आउन सक्छ ?
हो । दिमाग र छालाको बीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि स्थापना भएको छ । तनाव र चिन्ताको कारणले केही मानिसहरूमा छालाको बिमिरा (उरटिकारिया / हाइभ्स) हुन सक्छ । साथै, तनावले एक्जेमा र सोरियासिसजस्ता केही छालाको अवस्थालाई पनि खराब पार्न सक्छ ।
Q डिप्रेशनको लागि, फोन थेरापीले जवाफ हुन सक्छ ?
डिप्रेसन एउटा मानसिक विकार हो जसमा कुनै पनि व्यक्तिले एक्लो महसुस गर्न सक्दछ र उसको आफ्नो वरिपरी कसैलाई हेर्न चाहँदैनन् । यस अवस्थामा, फोन थेरापीले बिरामीलाई बाधा नपुर्याई परामर्श गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कुनै पनि तेस्रो व्यक्तिले रोग र उपचारको बारेमा थाहा पाउने छैन । बिरामी घरमा सजिलो महसुस गर्न सक्दछन् र गोप्य रुपमा समस्याको चर्चा गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्छ । बिरामीले क्लिनिकमा गएर ड्रेसिङ गर्न र परामर्श आदिको लागि जान र पर्खनबाट बच्न सक्दछ । तर, यसलाई पूर्ण उपचारको रूपमा विचार गर्नुपर्दैन । र यसमा एकजना व्यक्तिले फोनको समयमा समय अवधि सीमित गर्नुपर्छ ।
Q म कसरी भित्री विचारहरू हटाउन सक्छु ?
चिन्ता गर्ने व्यक्तिले भित्री विचारहरूको सामना गर्नुपर्छ । भित्री विचारहरू हटाउनको लागि, तपाईं आफैंको पूर्ण नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ भनेर महसुस गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ । भित्री अपमानजनक विचार भएका मानिसहरू सज्जन र अहिंसात्मक हुन्छन् । तपाईं आफैमा विश्वास गर्नु पर्छ । यो तपाईं नै हो, जसले आफैलाई मद्दत गर्न सक्दछ र अरु कसैले पनि होइन । तपाईं आफैलाई केहि सकारात्मक कुराहरु गरेर विचारहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । तपाईंले आफुलाई आराम गर्नु पर्छ र तपाईंको शरीर र दिमागमा भण्डारण भएर रहेको नकारात्मक ऊर्जालाई फ्यालि दिनुहोस् । आफ्नो मनोवृत्तिमा परिवर्तन गर्न सल्लाह दिइन्छ । मनोवृत्तिमा परिवर्तन गरेर तुरुन्तै भावनात्मक प्रतिक्रियालाई तपाईंसँग भएको डरलाग्दो विचारहरूमा रहन असक्षम पार्नेछ ।